दुवै हात जोडिएका कृष्णलाई देख्दा रुपा धरधरी रोइन् (फोटो र भिडियो) « Khabar24Nepal
दुवै हात जोडिएका कृष्णलाई देख्दा रुपा धरधरी रोइन् (फोटो र भिडियो)
काठमाडौं-आज फेरी कृष्ण वलि र रुपा मगर वलिको जोडीले आफुलाई रुवाएको शिशिर भण्डारीले बताएका छन । तर यसपाली वास्तविक कृष्ण र रुपा हैन, नाटकका पात्र कृष्ण र रुपाले रुवाए भण्डारीले फेस्बुकमा भनेका छन ।
राजधानीको दिल्ली बजारमा रहेको सर्वनाम थियटरमा मन्चन भैरहेको नाटक हेर्न कृष्ण र रुपासंगै शिशिर पनि पुगेका थिए । ‘रुपाकृ’ शिर्षकको नाटकमा रुपा र कृष्णको पहिलो, भेट, प्रेम, बिवाह कृष्णको दुर्घटना र त्यसपछिको अवस्थाका पिडा र रुपाको साथलाई निकै सुन्दर ढंगले चित्रण गरिएको रहेछ ।
रेनुका कार्कीले निर्देशन गर्नुभएको नाटक हेर्दा सबै रोमान्चित भए । छेऊमा बसेका रुपा र कृष्ण पनि हसाउने दृश्यहरुमा हास्दै थिए । अनि बिगतका कुरा सम्झदै थिए ।
अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहयोगार्थ फागुन १६ गतेसम्म अन्य दिन बेलुका ५ बजे र शनिबार दिउंसो १ बजे रुपाकृ नाटक मन्चन गरिनेछ ।
नाटकमा रुपा र कृष्णको बिहेको दृश्यलाई झनै कलात्मक तरिकाले देखाईएको छ । आफ्नो श्रीमतीको पढाई खर्च जुटाउन दांगमा बिद्युतिय कामको लागि गएका कृष्ण र रुपाको बिछोडको दृश्ले नाटक हेर्न आएका दर्शकहरु मात्रै हैन रुपा पनि भावुक भईन् ।
नाटकमा रुपाको भुमिकामा सोनिसा बजगाई र कृष्णको भुमिकामा सुदिप जंग कार्कीको अभिनय रहेको छ । यि दुई कलाकारको जीवन्त अभिनयले रुपाकृ नाटकमा प्राण भरेको छ ।
जब कृष्णले रुपालाई तिमी मलाई छोडेर जाऊं भन्छन् अनि त्यस्मा रुपाले अर्को भावानात्मक संवाद बोल्छिन्..नाटक हेर्ने कसैले आंशु रोक्न सक्दैन । कृष्ण र रुपाको वास्तविक कथा बुझेका मात्र हैन, उनीहरुलाई नचिन्नेहरुले पनि यो नाटकलाई महसुस गर्दै आंशु बगाउंछन् । अनि सन्चारकर्मी शिशिरले पनि मन थाम्न सकेनन ।
एउटा दरिलो सन्देश दिदै नाटक सकियो, वास्तविक जीवनकी रुपाले धेरैपछि फेरी आंशु बगाईन् । रुपा बोल्नै सकिनन् । मन थाम्नै नसकेर रोईन् । रुपा रुंदा सबै रोए ।
कृष्णले पनि आफ्नो बिगत आंखै अगाडि हेर्दा त्यो कालो दिनलाई सम्झिए । अनि रुपाको चोखो मायालाई फेरी एकपटक सम्मान गरे दर्शकबृन्हरु…!
हेर्नुहोस शिशिर भन्डारीको फेस्बुक स्टाटस जस्ताको त्यस्तै:-
सबैले शेयर गरौं–
आज फेरी कृष्ण वलि र रुपा मगर वलिको जोडीले मलाई रुवाए । तर यसपाली वास्तविक कृष्ण र रुपा हैन, नाटकका पात्र कृष्ण र रुपाले रुवाए ।
राजधानीको दिल्ली बजारमा रहेको सर्वनाम थियटरमा मन्चन भैरहेको नाटक हेर्न कृष्ण र रुपासंगै हामी पुगेका थियौं । रुपाकृ शिर्षकको नाटकमा रुपा र कृष्णको पहिलो, भेट, प्रेम, बिवाह कृष्णको दुर्घटना र त्यसपछिको अवस्थाका पिडा र रुपाको साथलाई निकै सुन्दर ढंगले चित्रण गरिएको रहेछ ।
रेनुका कार्कीले निर्देशन गर्नुभएको नाटक हेर्दा सबै रोमान्चित भए । छेऊमा बसेका रुपा र कृष्ण पनि हसाउने दृश्यहरुमा हास्दै थिए । अनि बिगतका कुरा सम्झदै थिए । अपांगता भएका व्यक्तिहरुको सहयोगार्थ फागुन १६ गतेसम्म अन्य दिन बेलुका ५ बजे र शनिबार दिउंसो १ बजे रुपाकृ नाटक मन्चन गरिनेछ । नाटकमा रुपा र कृष्णको बिहेको दृश्यलाई झनै कलात्मक तरिकाले देखाईएको छ ।
आफ्नो श्रीमतीको पढाई खर्च जुटाउन दांगमा बिद्युतिय कामको लागि गएका कृष्ण र रुपाको बिछोडको दृश्ले नाटक हेर्न आएका दर्शकहरु मात्रै हैन रुपा पनि भावुक भईन् । नाटकमा रुपाको भुमिकामा सोनिसा बजगाई र कृष्णको भुमिकामा सुदिप जंग कार्कीको अभिनय रहेको छ । यि दुई कलाकारको जीवन्त अभिनयले रुपाकृ नाटकमा प्राण भरेको छ ।
कृष्णको दुर्घटना कसरी भयो ? दुर्घटनाको अघिल्लो दिन कृष्ण र रुपाको एनिभर्सरी र दुर्घटनाको भोलीपल्ट कृष्णको बढुवा हुने दिन थियो..त्यो शिलशिलालाई नाटकमा कसरी उतारिएको छ ? यि सबै हेर्न तपाई राजधानीको दिल्ली बजारमा रहेको सर्वनाम थियटर पुग्नुहोला ।
जब कृष्णले रुपालाई तिमी मलाई छोडेर जाऊं भन्छन् अनि त्यस्मा रुपाले अर्को भावानात्मक संवाद बोल्छिन्..नाटक हेर्ने कसैले आंशु रोक्न सक्दैन । कृष्ण र रुपाको वास्तविक कथा बुझेका मात्र हैन, उनीहरुलाई नचिन्नेहरुले पनि यो नाटकलाई महसुस गर्दै आंशु बगाउंछन् । मैले पनि मन थाम्न सकिन ।
एउटा दरिलो सन्देश दिदै नाटक सकियो, वास्तविक जीवनकी रुपाले धेरैपछि फेरी आंशु बगाईन् । रुपा बोल्नै सकिनन् । मन थाम्नै नसकेर रोईन् । रुपा रुंदा सबै रोए । कृष्णले पनि आफ्नो बिगत आंखै अगाडि हेर्दा त्यो कालो दिनलाई सम्झिए । अनि रुपाको चोखो मायालाई फेरी एकपटक सम्मान गरे ।
यदि तपाई राजभानीमै हुनुहुन्छ भने..यो नाटकलाई एकपटक सबैले हेरौं । नाटकको बारेमा जिज्ञासा छन् भने फोन नं
९८४१२२५७२६ र ९८४९४८८४७३ मा सम्पर्क गर्नुहोला । सांच्चै कुनै उत्कृष्ट चलचित्र भन्दा कम छैन नाटक रुपाकृ ।
सरकारले गरेका ‘तीन वर्षका प्रमुख उपलब्धिहरू’ सार्वजनिक (पूर्णपाठसहित)
गायक हरि डिसीको ‘कालीपारे’ म्युजिक भिडियो सार्वजानिक
टिफरको ठक्करबाट साईकल यात्रीको मृ’त्यु